Igumbi LeStudio | Izindawo zokuhlala e- Lake Daylesford - I-Airbnb
Igumbi LeStudio | Izindawo zokuhlala e- Lake Daylesford
Ikamelo e-i-loft ibungazwe ngu-Discover Daylesford
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Discover Daylesford izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Studio Room 4 lihlala e-Balconies Lakeside complex - iqoqo lamagumbi amane asanda kulungiswa echibini eLake Daylesford. Isakhiwo sesitayela sika-Edwardian sihlala osebeni lwechibi futhi I-Studio Room 4 inikeza izivakashi igumbi eliyimfihlo elinokufinyelela kuvulandi. Umbhede wendlovukazi onethezekile, impahla yekhwalithi ephezulu, ukushisisa/ukupholisa kwesistimu ehlukanisayo, i-WIFI, ikhishi, i-microwave kanye nomshini we-coffee pod ezinye zezinto ezimbalwa izivakashi ezizozijabulela e-Balconies Lakeside phakathi nokuvakasha kwazo.
I-Studio Room 4 inikezela ukuthengeka kanye nokusebenziseka kalula kusuka ku-Balconies Lakeside complex, nokubukwa kwengadi kusukela ngaphambi kwendawo kanye nechibi ngaphesheya. Izivakashi zingaphumuza kuvulandi ongaphambili ngencwadi kanye nengilazi yewayini lasendaweni noma zilale embhedeni wosayizi wendlovukazi futhi zijabulele umabonakude wesikrini esiyisicaba. Ngokunaka okucashile emininingwaneni yamathoni ethulisiwe nemibala ihlinzeka ngokubaleka okunethezeka ezweni langaphandle, kuyilapho ukuthinta okucabangelayo nezinsiza kuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo ukuze ujabulele ubusuku obupholile.
4.41 · 17 okushiwo abanye
I-Daylesford kanye nesifunda esiyizungezile sekuyisikhathi eside kubhekwa njengendawo ekhethekile yokwelapha, ukuphumula nokuzitika. Itholakala emagqumeni eGreat Dividing Range, lesi sifunda saziwa kakhulu ngeziphethu zamaminerali zemvelo futhi siyikhaya lezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu, imipheme, izindawo zokuthengisa iwayini kanye nezindawo zokuphuza utshwala ezinikezwa yisifunda iVictoria. Itholakala ngaphansi nje kwehora nesigamu ukusuka eMelbourne, lesi sifunda siyikhaya lezinye izindawo zemvelo ezinhle kakhulu zase-Australia ezigcwele izitshalo nezilwane zomdabu. Hlala nathi, futhi masizitholele i-Daylesford.
Ama-ejenti Esevisi Yezivakashi azotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho phakathi namahora okusebenza kanye nenombolo yokuxhumana yesimo esiphuthumayo yamahora angatholakali kunoma yini engavamile. Iwebhusayithi yethu igcwele amabhizinisi endawo, izindawo ezithakazelisayo nezinto ongazenza ukuze ukwazi ukuhlala, ukuhlola, ukuphumula, ukuzitika nokuzitholela i-Daylesford unyaka wonke.
Ama-ejenti Esevisi Yezivakashi azotholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho phakathi namahora okusebenza kanye nenombolo yokuxhumana yesimo esiphuthumayo yamahora angatholakali kunoma…